> Resource > Android > Sida loo dhoofiyo Muuqaalka Xiriirada in Gmail
Ma badbaadiyey badan oo xiriirada in Outlook, laakiin hadda, aad jeceshahay in iyaga lagu wareejiyo si aad Gmail? Ha welwelin. Waa fud si ay u gudbiyaan xiriirada Muuqaalka in Gmail, marka aad leedahay qalab - TunesGo Wondershare . Iyadoo qalab this, aad wareejin karaan dhammaan xiriirada ka Outlook in aad iPhone, iPad ama iPod, ka dibna si aad u computer. Ka dib markii in, waa ay fududahay in aad soo dhoofsadaan xiriirada si aad Gmail.
Download qalab ay u guuraan xiriirada ka Outlook in Gmail.
TunesGo Wondershare aad bixisaa xal quruxsan u fududahay wareejinta xiriirada Muuqaalka in Gmail. Laakiin, waa in aad leedahay iPhone, iPad ama iPod sida wax dhexe.
Haddii aad tahay qof user ah Android, fadlan isku day Wondershare MobileGo for Android . Tababaraha Tani Android sidoo kale ku siinaysaa awood u leh in nuqul ka dhan xiriirada ka Outlook in Gmail si sahlan. Download MobileGo for Android oo ay leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa iPhone 5c / 5 / 5s / 4s, iPod xiriiri 5, iwm socda ee macruufka 5, macruufka 7 ama macruufka 6. Check liiska oo dhan oo ku saabsan aaladaha Apple taageeray .
Dhoofinta Muuqaalka xiriirada in Gmail in talaabooyin fudud
Hadda, rakibi ka dibna ay maamulaan TunesGo on your computer.
Tallaabada 1. Isku iPhone / iPod / iPad in ay kombiyuutarka
Isticmaal cable USB ah in la sameeyo xiriir ka dhexeeya, iPhone iPod ama iPad iyo kombiyuutarka. The iPhone, iPad ama iPod tusi doonaa in uu furmo suuqa ugu weyn ka dib markii la ogaado by TunesGo.
Tallaabada 2. xiriirada Import Muuqaalka si iPhone / iPad / iPod
In galeeysid bidix, u tag "Xiriirada". Riix xaq in la sameeyo koox xiriir cusub. Ama waxaad dooran kartaa mid ka jirta on your iPhone, iPad ama iPod. Markaas, in suuqa kala xiriir ah, guji "Import / Dhoofinta". Marka menu jiido hoos u muuqataa, guji "Import xiriirada ka computer". Dooro "ka Outlook Express" ama "ka Outlook 2003/2007/2010/2013". Markaas, TunesGo bilaabo inuu keeno xiriirada ka Outlook in aad iPod, iPhone ama iPad.
Tallaabada 3. Transfer xiriirada ka iPhone / iPod / iPad in kombiyuutarka
Hadda, dhammaan xiriirada Outlook ayaa aad iPhone, iPad ama iPod. In tallaabadan, waa in aad wareejiso, kuwaas oo xiriir si kombiyuutarka. Sax off xiriirrada Muuqaalka laga keeno.
Guji "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta soo xulay Xiriirada" ama "dhoofinta Dhammaan Xiriirada"> "in a vCard File Single" ama "Multiple vCard Files". Daaqadda file browser, heli iyadaa u ah si loo badbaadiyo faylka dhoofiyo vCard (s).
Tallaabada 4. xiriirada Dhoofinta ka Outlook in Gmail
Saxiix in aad xisaabta Gmail. In galeeysid bidix ee suuqa kala Gmail, guji "Gmail"> "Xiriirada". Markaas, guji "More" si ay u muujiyaan menu hoos-hoos. Dooro "Import ...".
Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala pop-up ah. By gujinaya "Dooro File", waxaad ka heli suuqa kala file browser. Dul caga meesha file vCard ee xiriirada Outlook la badbaadiyey. Markaas, guji "Import" si ay u gudbiyaan file vcard in ay Gmail.
Isku day TunesGo inuu u dhaqaaqo xiriirada Muuqaalka in Gmail.
Haddii aad isticmaalayso telefoonka ah Android, waxaad u tagi kartaa si Wondershare MobileGo for Android . Iyadoo tababaraha u fududahay in la isticmaalo Android, aad awoodaan in ay sidoo kale ku wareejin xiriirada ka Outlook in Gmail. Tutorial ayaa ku dhow waa isku mid sida mid ka mid ah la TunesGo.
day MobileGo for Android in wax lagu qabto!